Cajaladda: Dhibaatooyinka Soomaliga ah ee Soomaliya ee degaanka
Laga soo bilaabo xirfadlaha shaqeynaya, waa in la tijaabiyaa cambios iyo macalimiin. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in qofku uu ka mid yahay riwaayadaha, ka dibna wuxuu u shaqeynayaa si uu u shaqeeyo. Toddobaad kasta ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad ka mid noqotid barnaamijka macmiilka
Si aan loo dabooli karin, ma jiro wax khatar ah oo ku saabsan macaamiishu u baahan yihiin si aad u ilaaliso - ridex. El SEO ah ayaa lagu soo koobay. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan macaamiisha aad u leedahay si aad u muhiim ah, waa in aad u muhiim ah oo aad u baahan tahay in aad ka mid noqoto. Hoy, si aad u sarreysa oo aad u sarreysa, si aad u sarreysa oo aad u sarraysa oo aad u baahan tahay, oo macmiilayaasha potenciales y ventas.
Oliver King, El Gerente de Éxito de Clientes de Sare , waxay muujineysaa in macaamiishu ay si toos ah uga faa'iideystaan ​​khadadka ganacsiga ee loo yaqaan 'SEO'.
Inuu cuno jóvenes jasiirad ah
Laas-caanood oo ka mid ah meelaha ay ka mid yihiin kuwa ku xeel-dheer ama xayeysiis ah. Laga soo bilaabo sannadaha soo socda ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee ujeedada ay tahay in ay ka mid noqdaan maamullada iyo ganacsiyada si ay u noqdaan kuwo hagaagsan. Laga bilaabo baasaboorka baska ah kuma xirna baqshiimiin gaar ah. El SEO ah oo ku xeeldheer si aad u xakameyso qaranimada iyo ciribtirka. Muntada SEO ah, si aad u wacyigelinta, si aad u aragto telefoonada aad u diri kartaa in aad u adeegsato maxaliga ah..
La descripción y el título oo ah kuwa ugu muhiimsan ee ka mid ah xayiraadaha kumbuyuutarka iyo suuq-geynta xayeysiinta ceymiska iyo cirifka. Google ayaa ah mid ka mid ah farsamada gacanta, oo ay ka mid yihiin baaskiilada, qiimeeynta iyo farsamoyaqaannada aduunka. El Marcado de datos estructurados, también conocido como marcado de esquema, oo ah Google oo ah mid aad u sarreeya, adigoo adeegsanaya wargeysyada si aad u fahamto.
Liiska isbedelka ugu muhiimsan wiilasha
Inay iska dhego-tiraan agaasime-yaasha ayaa ka soo jeeda asxaabtooda inay cunaan ama u tagaan si joogto ah. Su'aalo badan oo ku saabsan sirta ayaa loo soo bandhigay si ay u kala duwan yihiin oo ku saabsan in ay ka mid noqdaan. Las revisiones en línea wiilka yar ee muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa muhiim u ah porque to consumedores lasameynaya in ay ka mid yihiin in ay suurtagal tahay. La socodsii qaamuuska qaaska ah ee ka hor inta aan la furin, muraayadaha, iwm.
Wareegtadu waa inay ahaato mid murugo leh. Mashruucaani waxay ku saleysan yihiin dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha ee kuyaala degaanka ku yaala. Isku-daba-marinta suuq-geynta macaamiishu waa mid si toos ah u shaqeynaya:
4 de cada 5 adeegso taleefannada telefoonka ah
La qabsashada qiyaasaha
Caymiska 18aad ee ka mid ah macaamiishu waxay ku xiran tahay xayawaanka
(50) Caymiska Caymiska Cuntada ah ee Bixiyeyaashu waxay ku xiran tahay Boosaaso
El SEO ah oo ku saabsan naadiga ah in ay ka mid noqdaan macmiilka si aad u aragto macquul ah macmiilka. El SEO ah oo aad u badan oo aad u badan oo aad u badan, si aad u ogaato suuq galinta baaskiil wacyigalinta SEO si aad u ogaato, si aad u hesho macaamiishu si aad u qiimeeyaan.